Manasongadina ireo lahatsoratra ato amin’ny Global Voices ho an’ny mpihaino voafaritra manokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2019 13:01 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny volana Jolay 2015)
Victoria Tinta sy Norma Barrancos
Tamin'ny taona 2013, notolorana ny iray tamin'ireo Vatsy ho an'ny Zava-baovao ny ekipan'ny Global Voices Aymara mba hanandraman'izy ireo zava-baovao. Mikasa ny hanasongadina ireo lahatsoratra GV amin'ny endrika rakipeo ho an'ireo mpihaino onjam-peo ao El Alto, Bolivia ny tetikasa antsoina hoe “Lingua Airwaves”. Maro amin'ireo mponina miisa 1 tapitrisa na mahery ao an-tanàndehibe no manana fihaviana Aymara. Na dia mahay sy mahatakatra tsara ilay fiteny aza izy ireo, dia maro an'isa amin'izy ireo no tsy afaka mamaky sy manoratra afa-tsy amin'ny teny Espaniôla .
Ny hanova ny lahatsoratra GV ho lasa endrika rakipeo mety ho an'ny onjam-peo ny hevitra fototra. Heverina ihany koa fa ilaina ny lohahevitra sy ny fanazavana fanampiny ho an'ny mpihaino izay mety tsy zatra hetsika mitranga manerana izao tontolo izao na ny resaka teknolojia.
Nanoratra sora-tanana ny ekipa GV Aymara ary nandrakitra rakipeo tamin'ny alàlan'ny fandraketam-peo nomerika niaraka tamin'ny mpanao gazety an'onjam-peo Aymara, Norma Barrancos. Nasiam-panovana avy eo ireo rakipeo tamin'ny alalàn'ny rindrambaiko Audacity . Norma no nitari-dia ny ekipan'ny volantera niaraka tamin'ny fanazarana mandraki-peo, anisan'izany ny feo, ny lantom-peo ary ny fandefasana (projection).
Rakipeo miisa 19 ny vokatra azo izay samy nanasongadina tsirairay ny lahatsoratra GV manokana ary nadika tamin'ny teny Espaniôla ary avy eo tamin'ny teny Aymara. Ity ambany ity ny lisitry ny rakipeo miisa 19, efa navoaka tao amin'ny Radio San Gabriel ny sasany tamin'izany, mpiara-miasa amin'ny GV Aymara io. Ny famadihana ireo rakipeo ho CD, mba ahafahana mizara izany amin'ireo onjam-peo samihafa, ny ivontoeram-pampianarana ary ireo mpanohana hafa no dingana manaraka amin'ny tetikasa.